Institute of Happiness, Institute of Bliss for Performing Arts - Belize City
Adiresy: Tanànan'i Belize any atsimon'i Belize, Belize;
Vokatra: tamin'ny taona 1955;
Phone: +501 (0) 227 2110.
Ny fanjakana madinika ao Amerika Afovoany ao Belize dia manan-karena amin'ny toetrany ara-kolontsaina sy ara-boajanahary. Ny vanim-potoanan'ny fanjanahana Anglisy dia namelona ny soatoavina Eoropeana vaovao, izay nanampy ny kolontsaina tranainy indrindra tamin'ireo mponina indizeny teto, ireo Maya Indianina. Ny fiangonan'ireto kolontsaina roa ireto dia nahita endrika mahaliana teo amin'ny andro maoderina, izay manintona mpizaha tany vaovao. Iray amin'ireo fiaraha-mientana maoderina, izay tena soso-kevitra hitsidika azy, dia ny Institute of Happiness.
Ahoana no nanorenan'ny Institute of Happiness?
Ny famindram-po eo amin'ny fototry ny Ivontoerana ho an'ny Fahasambarana dia an'ny mpiaro an'i Belize, mpiaro sy mpitaingina - ny baronolona anglisy Henry Edward Bliss. Nandritra ny androm-piainany dia nanokana dia an-dranomasina izy mandrapahatongan'ny andro iray tamin'ny taona 1929 dia tonga teo amin'ny sambo "King Sea" tany amoron-dranomasin'i Belize. Farany dia nanjary tia an'ity firenena maitso mena ity miaraka amin'ny tantara manankarena sy miaraka amin'ny mponina manamboninahitra, izy dia niondrika handevina ny tenany amin'ny moron-dranomasin'i Belize, ary nandao ny ampahany goavam-be tamin'ny taniny izy. Ao amin'ny volan'ny Bliss Foundation ao amin'ny firenena no naorina trano be voninahitra, izay ankehitriny no tena mahasarika mpizahatany manerana izao tontolo izao.
Iray amin'ireto toetr'andro ireto ny Institute of Happiness. Ny fikambanana, izay antsoina hoe romantika toy izany, dia ny Centre Belle Performing Arts. Ny anarana tsy ofisialy dia nahazatra azy fa taorian'ny fisokafan'ny Ivontoerana momba ny fahasambarana dia izy irery no foiben'ny firenena nandrafitra ny fampisehoana sy ny fampisehoana, fampiofanana mpanakanto.
Ny fananganana ny Centre for Performing Arts dia naorina tao an-drenivohitra Belize City . Amin'izao fotoana izao dia ny kolontsain'ny firenena, izay ahitana mpihira an-jatony maro isan-karazany mitsambikina avy eny rehetra eny.
Ny fanorenana ny Institute of Happiness dia vita tamin'ny taona 1955. Ny fanokafana ny foibe dia niaraka tamin'ny sangan'asan'ireo mpihira malaza Belize, mpanakanto avy any Grande-Bretagne, Espana ary Portogaly. Nandritra ny 50 taona mahery, ny foibe ara-kolontsaina dia nankasitraka ireo mpitsidika tamin'ny karazana varotra samihafa.
Institute of Happiness - famaritana
Ny Institute of Happiness dia tsy seza fotsiny na seza hanaovana fampisehoana. Betsaka ny lanjany ara-kolontsaina:
Ny Konsilin'ny Art National de Belize dia miorina amin'ny tany ambany ao amin'ny Centre for Performing Arts.
Ny tranobe faharoa nanomboka tamin'ny fotoana nanokafana ny taona 1994 dia nokarakarain'ny tranomboky lehibe indrindra tao amin'ny firenena, izay nosoratan'ireo sora-tanana tranainy, ny fanontana voalohany amin'ny baiboly izay tonga tany amin'ny tany vaovao misionera, ary koa ny tahiry boky manankarena amin'ny haisoratra maoderina maoderina. Taty aoriana dia nisy trano vaovao natsangana ho an'ny tranomboky, ary nanapa-kevitra ny hanitatra ny Institute of Happiness.
Teo amin'ny rindrina am-bavahadin'ny tranobe no nananganana fanitarana, izay mihetsika ankehitriny amin'ny National Gallery of Modern Painting .
Ny fikarakarana manokana dia tokony handoavana ny fanavaozana toy ny efitrano fandraisam-bahiny , izay mandray ireo vahiny manana kitapo marbra tsara, ary efitrano lehibe misy seza 600.
Mba hahazoana antoka fa ny fampihetseham-pon'ireo artista dia nampionona azy ireo, dia natokana manokana ireo trano famakiam-boky ho an'ny National Belize Dance Theater sy ny tarika mpanao tantara .
Ahoana no hahatongavana any amin'ilay Ivontoeran'ny Fahasambarana?
Ny Ivontoerana Hambinina dia manana toerana tena mahomby, ao afovoan- tanànan'ny Belize City , noho izany dia mora ny manatona azy.
Tranidad sy Tobago
Sandy tsy mety maty
Tsirin-tsakafo ho an'ny kefir
Japoney Sophora - fananan'olona sy fanoherana
Tapakila misy ranomandry ho an'ny valindrihana
Nahazo kintana iray tao amin'ny Hollywood Walk of Fame i Zoe Saldana
Ny sweatshirts amin'ny vehivavy 2014
Welpen of drathaara
Ny valala - aiza ary aiza no mampalahelo azy?
Akanjo amin'ny fomba boho
Ahoana ny endriky ny saka?
Fingotra tsy misy rantsana - fanatanjahantena tsara tarehy sy kofehy tsara tarehy, kofehy mamy sy lamaody